क्लिनिकल भ्रूणविज्ञान: के वैज्ञानिकहरूले, embryologists
क्लिनिकल भ्रूणविज्ञान - जन्म गर्न अवधारणा देखि भ्रूण विकास अध्ययन गर्न समर्पित विज्ञान को शाखा। यस क्षेत्रमा ज्ञान सबै डाक्टर आवश्यक छ।
रोग छोराछोरीको तुरुन्तै जन्म पछि निर्धारण बाल-असर मा आनुवंशिक असामान्यताहरु र विकार को प्रारम्भिक पत्ता लगाउने को भ्रूणविज्ञान द उद्देश्य। मिति, डाक्टर ज्ञान बाँझोपन को कारण निर्धारित र तिनीहरूलाई हटाउन यस क्षेत्रमा उपलब्ध छ, साथै गर्भनिरोधक लागूऔषधको विकास लागू हुन्छ। बाँझोपन को समस्या सम्बोधन धेरै लोकप्रिय आईवीएफ, को गर्भाशय मा भ्रूण transplantation, साथै अन्डा को खेती हुन्छन्।
भ्रूणविज्ञान को इतिहास
धेरै अन्य विज्ञान जस्तै क्लिनिकल भ्रूणविज्ञान प्राचीन समयमा उत्पत्ति। अरस्तू वैज्ञानिक कार्यहरूले चल्ला भ्रूण को विस्तृत वर्णन समावेश गर्दछ। एउटै समय र यस्तो epigenesis र preformation रूपमा प्रक्रियाहरु, विकास हेर्नुहोस् कुनै पनि यस्तो बिन्दु वरिपरि।
Dutchman जनवरी Swammerdam कीराहरू विकास र metamorphosis अध्ययन। आफ्नो compatriot Antoni भ्यान Levenguk मानव शुक्राणु अध्ययन, लाईकीराको मा parthenogenesis खोज। इटालियन मार्सेलो Malpighi, को चल्ला भ्रूण को विकास को अध्ययन गरे Tissues र विभिन्न बिरुवाहरु र जनावरहरूको अंगहरु को शरीर रचनाको विज्ञान अध्ययन। वैज्ञानिकहरूको दृश्य को बिन्दुबाट, विकास प्रक्रिया केहि नयाँ उत्पादन छैन मा, भ्रूण को सबै भागहरु पहिले नै गठन गरिएको छ र अन्डा मा हो, तर किनभने सानो आकार को तिनीहरूलाई देख्न सक्छौं। पछि मात्र भ्रूण वृद्धि। स्वभाविक जीव preformationist असम्भाव्य देखिन्थ्यो वैज्ञानिकहरू। तिनीहरूले भ्रूण को अन्डा वा शुक्राणु मा त हो भनेर विश्वास गर्थे। तथापि, तिनीहरूले अन्य अभिभावक को सन्तानहरू पास छन् आनुवंशिक गुण कसरी बुझ्न सकिएन।
को 19 औं शताब्दीको पहिलो आधा मा लगातार तथ्य preformism contradicting थिए। त्यतिबेला ठूलो strides तुलनात्मक शरीर रचनाको विज्ञान र taxonomy छ। जीवाणुतत्व को क्षेत्र मा मुख्य विधि को एक बन को तुलनात्मक विधि। गठन यी तुलनात्मक embriology विकास जडानमा। यस क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम Karlom Berom, भ्रूणविज्ञान को संस्थापक मानिन्छ जो प्राप्त गरेका थिए।
राम्ररी अध्ययन भ्रूण विकास vertebrates को बिल्कुल सबै वर्ग को वैज्ञानिकहरूले एउटा प्रारम्भिक चरण मा सबै जीवाणुहरू समान हो, र मतभेद मात्र पछि विकास समयमा बन्न कि पाएका छन्। यो भ्रूण समानता को व्यवस्था फारम गर्न सम्भव छ।
यो प्रवृत्ति विकास डार्विन गरेको अनुसन्धान पछि भयो। को नैदानिक भ्रूणविज्ञान सोभियत वैज्ञानिकहरू आई आई Mechnikov र AO Kovalevsky गरेको एक विशेष ठूलो योगदान।
क्लिनिकल भ्रूणविज्ञान - आमा शरीर वा खोल अन्डा मा भ्रूण को विकास अध्ययन गर्ने विज्ञान। जन्म गर्न अवधारणा देखि भ्रूण विकास प्रक्रिया, धेरै चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
एक zygote को गठन;
जुदाई सेल पछि blastula को गठन;
histogenesis र Tissues र भ्रूण र placenta को अंगहरु को organogenesis;
साथै, भ्रूणविज्ञान कारण जटिल, महत्वपूर्ण विकास को adversely केही कारक को प्रभाव अन्तर्गत भ्रूण को स्थिति प्रभावित सक्छ जो अवधि, चिनिन थाले।
भ्रूणविज्ञान को अध्ययन विषयको
आधुनिक भ्रूणविज्ञान को भ्रूण को गठन प्रक्रिया अध्ययन गरिएको छ। वैज्ञानिकहरु भ्रूण को विकास तीन मुख्य चरणमा स्थान लिन्छ भनेर भन्न:
विकास को2सप्ताह गर्न अवधारणा माथि को क्षण देखि;
को भ्रूण एक भ्रूण हुँदा तेस्रो हप्ता, संग;
जन्म अघि अत्यावश्यक अङ्गहरू विकास भएकोले।
आईवीएफ भ्रूणविज्ञान को प्रक्रिया समयमा यो किनभने आधुनिक अवसर धन्यवाद पनि शुरू भएको र सामान्य गर्भावस्था को लागि इष्टतम स्थिति सिर्जना महत्त्वपूर्ण छ। वैज्ञानिक डाटा को आवेदन मा, विशेषज्ञहरु अग्रिम निर्धारण गर्न र भ्रूण malformations को घटना को संभावना रोक्न हुनेछ। भ्रूणविज्ञान को विज्ञान धन्यवाद, वैज्ञानिकहरू बाल विकास को खतरनाक अवधि पहिचान छ:
को uterine पर्खाल मा भ्रूण आरोपण;
प्रमुख Tissues गठन;
अंगहरु र प्रणाली विकास;
यी अवधि समयमा, विभिन्न नकारात्मक कारक को प्रभाव धीमा वा भ्रूण मृत्युको पनि असामान्य विकास हुन सक्छ। क्लिनिकल भ्रूणविज्ञान आदर्श विचलनको समस्याको अध्ययन, साथै दुर्व्यवहार जोगिन गर्न, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न तरिकाहरू देख गरिएको छ।
डा-embryologists मल मुद्दाहरू संलग्न, र, भ्रूण गरेको विकास प्रक्रिया नियन्त्रण खेती अप गर्भाशय आफ्नो स्थानान्तरण को चरण गर्न। जब आईवीएफ भ्रूणविज्ञान समस्या को अस्तित्व, साथै तिनीहरूलाई समाधान तरिकाहरू देख परिभाषित। Embryologist बाँझोपन को समस्या अस्पताल लागू गर्ने जोडे को निदान र पछि उपचारका लागि उपाय एक जटिल बाहिर वहन।
प्रत्येक विवाहित दम्पतीले डाक्टर गर्ने अधिकार दृष्टिकोण धारण:
गर्भाधान - को गर्भाशय मा शुक्राणु को परिचय;
शुक्राणु गुणस्तर र मल परिणाम मूल्यांकन;
culturing र uterine गुहा मा भ्रूण को transplantation।
डाक्टर embryologist Vivo मा मल रोक्न भनेर अवरोध छल्न मदत, नयाँ जीवनको उद्भव लागि सबैभन्दा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्छ। एक सकारात्मक परिणाम आधुनिक प्रविधिको आवेदन द्वारा हासिल छ।
के भ्रूणविज्ञान प्रयोगशाला मा हुन्छ
भ्रूणविज्ञान मा केन्द्र डाक्टर बाँझोपन को कारण निर्धारण गर्न जोडे को एक सर्वेक्षण सञ्चालन र त्यसपछि उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् छ। प्रयोगशाला मा त्यहाँ मानव शरीर को वातावरण अनुकरण सबै अवस्था हो रूपमा, मल र भ्रूण को खेती आयोजित, आईवीएफ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो।
भ्रूणविज्ञान मा, केन्द्र सुरुमा हर्मोन को मद्दत आफ्नो वृद्धि निगरानी र भ्रूण replanting लागि गर्भाशय तयार गर्ने महिला को ovaries मा अन्डा को वृद्धि बढावा जो रोगी-डाक्टर प्रजनन प्रणाली, कार्य गर्दछ। त्यसपछि प्रयोगशाला पठाइएका छन् जो शरीर देखि प्राप्त एक विशेष सुई ova प्रयोग गरेर। प्रयोगशाला अवस्था अन्तर्गत शुद्धीकरण बाटो शुक्राणु सुख गर्न बाहिरी खोल देखि अन्डा लगे, र विशेष पोषक तत्व मध्यम एक कचौरा मा राखिएको छ।
को oocytes हटाउने पछि पुरुष शुक्राणु पनि विशेष प्रक्रिया चल्छ भन्ने सुनाउँछन्। फलस्वरूप, सबै भन्दा मोबाइल शुक्राणु चयन गरिएका छन्। त्यसपछि, सक्रिय शुक्राणु कक्षहरुमा अन्डा संग कचौरा मा सार्न, मल प्रक्रिया यो बिन्दुबाट सुरु हुन्छ। एक दिन पछि, zygote लागि प्रजनन भूमि ताजा बदलिएको छ। 4-5 दिनको लागि डाक्टर सञ्चालन भ्रूण को निगरानी र त्यसपछि महिलाको शरीर मा एक लिफ्ट तिनीहरूलाई दिन्छ।
को embryological प्रोटोकल के हो
को सञ्चालन मल, आईवीएफ को प्रक्रिया मा प्राप्त जानकारी, एक विशेष कागजात लिपिबद्ध गरिन्छ, embryological प्रोटोकल भनिन्छ। यो खेती र भ्रूण को विकास गर्न सम्बन्धित सबै जानकारी छ।
18 घण्टा प्रक्रिया पछि, डाक्टर fertilized अन्डा को संख्या मा प्रारम्भिक जानकारी दिन्छ। कागजात डाटा भ्रूण, खण्डीकरणको क्रमलाई र नियमित रूपमा सेल व्यवस्था वरिपरि गठन गर्ने खोल को नातेदार मोटाइ निर्दिष्ट गर्दछ।
भ्रूण विकास चरणमा
मल को प्रक्रिया जटिल छ र क्रोमोजोममा को रिकभरी सेट, र त्यहाँ नयाँ fertilized अन्डा गठन गरिएको छ जुन बेलामा पुरुष र महिला रोगाणु कक्षहरूको एक फ्युजन, implies। मल शुक्राणु र ova को फ्युजन गरेर fallopian ट्यूब मा हुन्छ।
12 उत्पादन zygote घण्टा मल पछि महिलाको शरीर। केही दिन पछि zygote एक विभाजन छ, blastomeres त्यसपछि दुई, ठूलो आकार र गाढा रंग मा जो एक उत्पादन गर्छ। किनभने ठूलो भाग भ्रूण, placenta, र अन्य Tissues गठन। को भ्रूण को uterine अस्तर सम्मिलित छ।
को भ्रूण को विकास बढ्न र पहिलो9महिना भन्दा बढी विकास जो एक क्रमिक फैशन प्रमुख अङ्गहरू र बच्चा को Tissues, परिणामस्वरूप, आफ्नो पछि विभाजन छ रूपमा।
प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू embryologists
भ्रूणविज्ञान को विज्ञान को आगमन संग, वैज्ञानिकहरू निरन्तर सुधार र विकास हो। भ्रूणविज्ञान को संस्थापक प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि प्राकृतिक घटना चासो देखाए गर्ने Baer, कार्ल Maksimovich, छलफल। उहाँले भ्रूण विकास मुख्य प्रकार पहिचान र सबै vertebrates नै सिद्धान्त विकसित छन् साबित भयो।
अर्को चिरपरिचित डाक्टर, embryologist छ Garvey Uilyam, आधुनिक शरीर विज्ञान र भ्रूणविज्ञान को संस्थापक। आफ्नो काम मा उहाँले ठूलो र सानो परिसंचरण को सिद्धान्त वर्णन गरे।
सूक्ष्म जीव विज्ञान र इम्यूनोलजी को संस्थापक - रूसी वैज्ञानिकहरू embryologist Mechnikov इल्या Ilich छ। आफ्नो लेखोटहरूमा, उहाँले प्रतिरक्षा एक सिद्धान्त र multicellular जीव को मूल औंल्याए। यो पनि उमेर बढन को अध्ययन मा लगी भएको छ।
प्रविधी इन्सुलिन: कार्य अल्गोरिदम, सुविधा र सिफारिसहरू
चिहानहरू 'रोग: कारणहरू, लक्षण, उपचार
भंग। भंगको प्रकार र तिनीहरूको परिणामहरू
कसरी डार्थ वर्डलाई आफैंको पोशाक बनाउने?
Elena Shvarts: जीवनी, विशेष गरी गतिविधिहरु, कार्यशालाओं र समीक्षा
फूलले कसरी तिम्रो हातले बनाउँछ?
तरकारी ककटेल: व्यञ्जनहरु। एक ब्लेंडर मा तरकारी smoothies
सबै एनिमेसन बारेमा: कसरी SIFCO "VKontakte" के